जबसम्म तपाईं गएको केही महिनादेखि चट्टानमुनि बस्नुभएको छ, सायद तपाईंलाई थाहा छ कि २०२० कोरुनाभाइरस महामारीको वर्ष हो।
संकटले देशहरूलाई राष्ट्रिय लकडाउनमा बाध्य पारेको छैन, तर अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा पनि पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। त्यो हो हामीले गम्भीर स्वास्थ्य असर र महामारीको जारी जोखिमहरूमा पुग्नु अघि।
तर यसको एसईओसँग के गर्नुपर्दछ? ठीक छ, वास्तवमा, धेरै धेरै।
कोरोनाभाइरस महामारीको मापनले धेरै कम्पनीहरूले उनीहरूको व्यवसायलाई अनलाइन सार्दै गरेको छ। प्राय: पहिलो पटक।
यो मानिसहरुलाई आफ्नो घरहरुमा सीमित हुनु र टाढाको कामलाई अँगाल्नेसँग मिल्छ। साथै, प्राय: पहिलो पटक।
नतिजाको रूपमा, इन्टरनेटको उपयोगको स्तर आसमान छ। र यो आशा गरिन्छ कि त्यसरी नै रहनेछ किनकि धेरै कम्पनीहरू अनलाइन व्यवसायमा विकसित हुन्छन् र घरबाट कामका लागि स्टाफका लागि दीर्घकालीन विकल्प हुन्छन्।
विज्ञहरूको ई-वाणिज्य र डिजिटलाइजेसन को भविष्यवाणी पछि वर्षो ईंट र मोर्टार को व्यवसाय बाट लिन्छ, यो भइरहेको जस्तो देखिन्छ। लगभग राति।
यसको मतलब अनलाइन संसार अझ बढी भीड हुनेवाला छ, डिजिटल विपणन र एसईओ मा पहिले भन्दा भन्दा बढी लगानी गर्न यो महत्त्वपूर्ण बनाउँदै।
ई-वाणिज्य र अनलाईन व्यवसायले कोरोनाभाइरस भन्दा पहिले स्थिर विकासको आनन्द लिइरहेका थिए। तर महामारीको कारण मानिस शपिंग र व्यवसाय अनलाइन सञ्चालनमा उडी बढ्न गएको छ।
त्यसोभए, यदि तपाईंसँग अनलाइन व्यापार छ तर तपाईं एसइओ को बारेमा धेरै जान्नुहुन्न भने, केही एसईओ उपकरणहरूमा लगानी गर्न यो राम्रो समय हो।
हो, जहाँसम्म मन्दीले हाम्रो बाटोको आशा गर्दछ।
जतिसक्दो चाँडो मानिसहरूले वित्तीय स about्कटको बारेमा कुरा गर्न थाल्छन्, यो तपाईको टाउको बालुवामा हाल्ने र यसलाई बग्ने बित्तिकै पर्ख्न लोभ्याउन सक्छ। तर व्यवसाय र ब्रान्डहरू जुन संकटको समयमा बाँच्दछन् ती दृश्यहरू रहिरहन्छन्।
SEO ले व्यवसायलाई दृश्यात्मक रहन र नयाँ ग्राहकहरुलाई तपाइँको तरिकामा पठाउन मद्दत गर्दछ।
कसरी? यो सुनिश्चित गरेर कि तपाइँको वेबसाइट टिप-शीर्ष अवस्थामा छ र गुगल जस्ता खोज ईन्जिनहरूले पत्ता लगाउन अनुकूलित छ।
SEO के गर्न सक्दछ?
यदि तपाईंलाई पहिले नै थाहा छैन भने, SEO खोज इन्जिन अनुकूलनको लागि खडा छ।
यसको मतलब उपकरण र टेकनिकको चयनलाई वेबसाइट भरमा रोल आउट गरिन्छ ताकि सर्च इन्जिनहरूले यसलाई इन्टरनेटको विशाल विश्वमा फेला पार्न सक्दछन्।
यति धेरै सामग्री अनलाइन उपलब्ध भएपछि, यो ब्लग, ल्यान्डि page पृष्ठ वा सम्पूर्ण वेबसाइटको लागि भीडमा हराउन सजिलो हुन सक्छ। तर अधिक सामग्री खोज ईन्जिन एल्गोरिथ्मको लागि अनुकूलित छ, अधिक प्रतिस्पर्धी हुन्छ। त्यो पछि जब वेबसाइट एक परिणाममा उच्च देखिन्छ।
सरल, सही लाग्छ?
यो हुनुपर्दछ, तर खोज इञ्जिनहरूले नियमित रूपमा तिनीहरूको एल्गोरिदम परिवर्तन गर्दछ। त्यसोभए, गत वर्ष के काम गर्‍यो, वा यो बर्षको शुरुमा, अहिले काम नगर्न सक्छ।
यद्यपि त्यहाँ केहि प्रविधिहरू छन् जुन समयको परिक्षा हो, र ती मध्ये एउटा प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरूको प्रयोग हो।
कुञ्जी शब्दहरू व्यक्तिगत शव्दहरू वा वाक्यांशहरू हुन् जुन व्यक्तिहरू अनलाइन खोजी गर्दैछन्।
उदाहरण को लागी, कसैले चकलेट को लागी खोज्दै गुगलमा टाइप गर्न सक्दछ, "उत्तम मिल्क चकलेट" वा "स्वतन्त्र चकलेट निर्माता"। यदि ती शब्दहरू तपाइँको वेबसाइट सामग्रीमा सहि सुविधाहरूमा चित्रित छन् भने, गुगलले तपाइँको साइट फेला पार्नेछ र परिणामहरूको बीचमा यसलाई क्रमबद्ध गर्नेछ।
अझै पनी पनि, कुञ्जी शव्दहरू एक्लो हुने ग्यारेन्टी हुँदैन शीर्ष स्पॉटहरू। त्यसो भए तपाईले मेटा ट्यागहरूको बारेमा सोच्न आवश्यक छ, हेडलाइन्स र छविहरू अनुकूलन गर्नुहोस्, लिंक निर्माण र अद्वितीय सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्।
त्यहि हो जहाँ पेशेवरहरु संग काम आउँछ।
Semalt एक त्यस्तै कम्पनी हो जसले तपाइँको वेबसाइट याद गर्न मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईं Semalt सँग पहिल्यै परिचित हुनुहुन्न भने, द्रुत परिचय यहाँ छ।
Semalt एक पूर्ण स्ट्याक डिजिटल एजेन्सी है जो किभ, युक्रेनमा आधारित छ। योसँग १०० भन्दा बढी रचनात्मक आईटी र मार्केटिंग पेशेवरहरू छन् - साथै पाल्तु कछुवा टर्बो - र विश्वभरका ग्राहकहरूसँग काम गर्दछ।
Semalt मा मुख्य सेवाहरू SEO पदोन्नती, वेब विकास, उन्नत विश्लेषक, र व्याख्याकर्ता भिडियो उत्पादन हो।
डिजिटल टेक्नोलोजीमा निश्चित रूपमा जडित पृष्ठभूमिको साथ, Semalt ले Google खोज परिणामहरूको शीर्षमा ग्राहकहरू प्राप्त गर्न वर्षौंको लागि अनौंठो एसईओ समाधानहरू सिर्जना गर्दैछ।
र, जस्तो कि इन्टरनेट को उपयोग गर्ने कसैले तपाईंलाई भन्नेछ, शीर्ष स्थान हो जहाँ सबै कम्पनीहरू हुन चाहन्छ।
यसैले SEO यति महत्त्वपूर्ण छ। सम्भावित मन्दीको सामना गर्नुपर्दा समेत।
अझै पक्का छैन? Semalt सफलता कहानी मा एक नजर राखौं।
जैविक यातायात बढ्दै
को लागि एक यूके आधारित अनलाइन पोर्टल खोज र फ्रेंचाइजी किन्न आफ्नो वेबसाइटमा जैविक ट्राफिक बढाउन चाहान्थे।
व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मक कोठामा सञ्चालित भएकोले यसको अर्थ पे पे क्लिक (पीपीसी) अभियानहरू चलाउन महँगो थियो। यही कारण छ कि ब्यापार मालिकले अधिक यातायात उत्पन्न गर्न सस्तो तरीकाको लागि SEO मा परिवर्तन गरे।
Semalt संग नौ महिना पछि, यी परिणामहरू थिए:
जैविक यातायात 30०3 प्रतिशतले बढ्यो
TOP-10 मा ,,782२ कीवर्डहरू
प्रति महिना भ्रमणहरू २,१4 by ले वृद्धि भयो
टोलीले वेबसाइटको पृष्ठस्पेड प्रदर्शन जस्ता प्राविधिक त्रुटिहरू फिक्स गरेर र अप-टु-डेट साइटम्याप उत्पन्न गरेर सुरु गर्‍यो। छविहरू Alt ट्यागमा कुञ्जी शब्दहरूको साथ पनि अनुकूलित थिए।
अर्को, Semalt फ्रान्चाइजी का प्रकार सम्बन्धित कुञ्जी शव्दहरूको चयन संग पign्क्तिबद्ध गर्न लि building्क निर्माण अभियानबाट किकक गरियो। यो वेबसाईट गुगल शीर्ष -१० मा दर्जा प्राप्त गर्दछ, एक माध्यमिक अनुकूलित अभियानको साथ जुन अत्यधिक प्रतिस्पर्धी गुगल TOP-5 स्थितिमा पुगेको छ।
परिणाम स्वरूप, ग्राहक अब फ्रान्चाइजी ट्रेडिंग उद्योगमा एक अग्रणी कम्पनी हो। Semalt को साथ एक वर्ष भन्दा कम पछि प्रभावशाली परिणामहरू।
SEO को साथ सुरू गर्दै
Semalt मा, त्यहाँ SEO को साथ शुरू गर्नका लागि दुई तरिकाहरू छन् - AutoSEO र FullSEO।
हामी कुन समाधान तपाईको लागि उपयुक्त छ भन्ने पत्ता लगाउन प्रत्येक समाधानको साथ के प्राप्त गर्न सक्दछौं हेरौं।
साना व्यवसायका लागि जुन साइट ट्राफिक बढाउन चाहान्छन्, AutoSEO एक राम्रो सुरूवात बिन्दु हो।
हुनसक्छ तपाई ठूलो लगानी गर्न तयार हुनुहुन्न। वा तपाईं पहिले केही ठोस परिणामहरू हेर्न चाहनुहुन्छ? त्यसो भए AutoSEO विशेष रूपमा शुरुआतीहरूको लागि एसईओ नमूनाको लागि सस्तो तरीका हो।
सेवा एक वेबसाइट को वर्तमान स्थिति मा एक रिपोर्ट संग शुरू हुन्छ। यसपछि त्रुटिहरू पत्ता लगाउन र गर्न पर्ने सुधारहरू पहिचान गर्नका लागि एक एसईओ विज्ञ द्वारा पूर्ण विश्लेषण पछि गरिन्छ।
अर्को, एक SEO ईन्जिनियरले प्रासंगिक यातायात उत्पन्न कुञ्जी शव्दहरू छान्छ। त्यसो भए Semalt को टेक्नोलोजीले डोमेन-युग र गुगल ट्रस्ट रैंकको आधारमा छनौट गरिएका साइटहरूको साथ, आला सम्बन्धित वेब स्रोतहरूमा लिंकहरू निर्माण गर्न सुरू गर्दछ।
एक पटक उपकरणहरू स्थानमा भएपछि, Semalt ले AutoSEO ग्राहकहरूलाई दैनिक अपडेटहरू प्रदान गर्दछ जहाँ कुञ्जीशब्द क्रमबद्ध छन्। टोलीले अभियानको सफलताको आकलन गर्न नियमित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पनि तयार गर्दछ।
यी सबैले एक वेबसाईटलाई खोजी ईन्जिनलाई माथि सार्न मद्दत गर्दछ AutoSEO 100 प्रतिशत प्रभावकारिताको प्रतिज्ञा।
पूर्ण एसईओ एक कदम पछि छ। यसले ठूला व्यवसायहरू वा धेरै कम्पनीहरूका मानिसहरूका लागि एकीकृत एसईओ समाधान प्रदान गर्दछ। यो वेबसाइट को अनुकूलित गर्न केहि थोरै पैसा लगानी गर्न तयार भएकाहरूको लागि पनि उत्तम विकल्प हो।
पूर्ण एसईओ प्याकेज गहन विश्लेषणमा आधारित छ, अद्वितीय सामग्री निर्माणमा केन्द्रित साथ। उद्देश्य महत्त्वपूर्ण वेबसाइट ट्राफिक वृद्धिको लागि र गुगल-टोपलाई वेबसाइट पठाउनको लागि हो।
फुलएसईओको साथ, Semalt को टीमले सुनिश्चित गर्दछ कि वेबसाइट पूर्ण रूपमा SEO मापदण्डको अनुपालन गर्दछ। यो द्वारा गरिन्छ:
टुटेका लिंकहरू हटाउँदै
वेबसाइट इन्टरलिinking्क बढाउँदै
फुलसेओको अन्य फाइदाहरूमा वेबसाइट विकास र मूल एसईओ-मैत्री सामग्रीको सिर्जनाको लागि Semalt बाट पूर्ण सहयोग समावेश छ।
AutoSEO र FullSEO दुबै संग, तपाईं प्रतिभाशाली Semalt लेखकहरू, SEO विशेषज्ञहरू र ईन्जिनियरहरूसँग तपाईंको वेबसाइटलाई अनुकूलन गर्न र SEO अनुकूलित सामग्री सिर्जना गर्न काम गर्नुहुनेछ।
Semalt टोलीसँग अनलाइन क्षेत्रको लागि अनौंठो सामग्री सिर्जना गर्न वर्षौंको अनुभव छ। लेखकहरू एसईओ उत्तम अभ्यासहरू द्वारा निर्देशित छन् र एक सही उत्पादन प्रस्तुत गर्न प्रतिबद्ध छन् जुन सबै सही बक्सहरू टिक्दछ।
नतिजा सकारात्मक लगानी र तपाइँको व्यापार को लागी दीर्घकालीन बृद्धि हो।
त्यसैले कोरोनाभाइरसको बखत एसईओमा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हो।
धेरै हिसाबले, भविष्य अनिश्चित हुन सक्छ, तर जब यो एक अनलाईन व्यापार बढ्दै आउँछ, एसईओ रहनको लागि यहाँ छ।